The Best Free Torrent Player E Nwere
> Resource> Video> The Best Free Torrent Players E Nwere
Tupu anyị amalite, a ngwa ngwa Cheta na iyi faịlụ. Dị ka Wikipedia, a iyi faịlụ e dere ihe na URLs nke ọtụtụ trackers; ihe integral metadata banyere niile nke media faịlụ ka ike ibudata na ndị ọzọ metadata kọwaa extensions ka BitTorrent nkọwapụta dị ka mma. Na ndị ọzọ okwu, a iyi faịlụ bụ nnọọ a akpa nke data nke na-enyere BitTorrent ịchọta lekwasịrị na mezue download. Otú ọ dị, ọ na-adịghị dere media ọdịnaya na niile. Ya mere, mgbe anyị na-ekwu okwu banyere 'play iyi faịlụ', anyị n'ezie pụtara ebudatara media faịlụ (s), na extensions nke ndị na-emekarị na AVI, MKV ma ọ bụ MP4 usoro. Na naa, ugbu a na ị maara a bit banyere iyi, ka ina malitere.
NO.1: Video Ntụgharị - A vasatail Torrent Player
The Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac), bụ karịa a vasatail iyi ọkpụkpọ. Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute n'efu ma kpọọ gị iyi faịlụ ahụ na-echekwara na dị iche iche formats. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ihe kasị nke iyi faịlụ dị ka video akakabarede, video download, video edezi ma ọ bụ na-ere ọkụ a DVD ma ọ bụ wdg, i nwere ike ime ihe nile na na ya.
Dị iche iche na decodes na-ebu ụzọ amata na, ị na-adịghị mkpa wụnye ọ bụla codecs ma ọ bụ nkwụnye ins mgbe egwu na-akpọ nta ka ọ bụla faịlụ formats (n'ezie gụnyere AVI, MKV, MP4 na wdg).
Cross-ikpo okwu: Windows 8/7 / XP / Vista; Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6.
Snapshot: ị pụrụ snapshot nke ọkacha mmasị gị idaha mgbe egwu na-akpọ iyi faịlụ.
Nbudata: ị nwere ike ibudata vidiyo si na YouTube na ndị ọzọ na video-ekere òkè saịtị
Ndekọ: ma ọ bụrụ na weebụsaịtị na ị na-ekiri adịghị ekwe ka nbudata, i nwere ike pịa Record iji nweta ezigbo àgwà ndekọ.
Common edezi ọrụ: mkpụbelata, akuku, gbawara n'etiti, tinye ndepụta okwu na wdg
Ike akakabarede na lossless àgwà na elu ndakọrịta: Ị nwere ike tọghata gị ebudatara iyi faịlụ ka a zuru ndepụta nkịtị video ma ọ bụ ọdịyo na HD video; nwekwara a dịgasị iche iche nke ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, iPod, HTC, Blackberry, iRiver, Zen na wdg
(Rịba ama: n'ihi na free ikpe mbipute, e ga-watermark fter akakabarede)
NO.2: Wondershare Player- A Free na Easy-eji Torrent Player
The Wondershare Player bụ fechaa, dị ike na-nwere ike igwu fọrọ nke nta ọ bụla media format si n'ebe. Ndị ọzọ karịa na-egwu DVD, ọ nwekwara ike-eji dị ka ihe audio decoder. Na n'elu nke ya, ọ dịghị achọ ihe ọ bụla ma ọ bụ mpụga mmezi codecs na-agba ọsọ.
Pụrụ ịdabere na playback nke dị iche iche multimedia faịlụ gụnyere DVD, HD video, SD video na ọdịyo; na ọ dịghị ọzọ codecs ma ọ bụ nkwụnye ins mkpa.
Enwusi-ngwa-ngwa playback niile media faịlụ na merela agadi Oke X technology; videos ịmalite ịkpọ egwu n'otu ntabi na seamlessly.
Napụta nkiri-dị ka enjoyments na itunanya nlegharị anya; enwe sachaa HD àgwà na-egbusi nkọwa, ezigbo mezuo iwu na doro anya na agba.
Kensinammuo aghụghọ na Dịkwa n'Usoro interface; -enye ndị ọzọ ọrụ na ntọala maka akara nri gị na fingertips.
VLC, akpa wepụtara na 2000 bụ ọhụrụ tụnyere ndị ọzọ media Player, ma ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu. Ọ bụ a kwesịrị-nwere n'iyi ọkpụkpọ na ị ga na ọtụtụ mgbe anụ VLC mgbe arịọ mmadụ banyere ha mmasị mgbasa ozi ọkpụkpọ.
Na-emeghe-iyi, ukwuu-obere free media ọkpụkpọ.
Cross-ikpo okwu: Windows, Mac OS X, Linux, iOS na wdg
A ọtụtụ nke na-akwado formats gụnyere AVI, MKV, MP4, 3GP, ASF na nta niile nkịtị na-ewu ewu formats, karịsịa maka iyi video ibudatara na Ịntanetị.
Ruru ya hà dabeere Ọdịdị, ọ nwere ike-egwu video ọdịnaya ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-mebiri emebi, na-ezughị ezu ma ọ bụ emechaghi (ie ị nwere ike igwu iyi nkiri mgbe ọ ka na-nbudata)
NO.4: KMplayer - A Nkecha Torrent Player
KMplayer, makwaara dị ka K-Multimedia Player, ọ bụ a fechaa ọdịyo na video ọkpụkpọ maka Windows (Win2000 / XP / 2003 / Vista / 7). Ọ bụ kpam kpam free ma na-akwado a dịgasị iche iche nke dị iche iche faịlụ formats gụnyere AVI, MKV, MP4, WMV, FLV na ọtụtụ ndị ọzọ.
Amamiihe interface: ọcha na jụụ. Ị nwere ike ngwa ngwa ịnweta nhọrọ nke video ọkpụkpọ n'ime ole na ole clicks.
Ukwuu customizable: ị nwere ike ịtọ ọtụtụ ọdịyo na video mmetụta (ie 3D), jiri nwayọọ ma ọ bụ dịkwuo playback ọsọ, họrọ akụkụ nke a video dị ka ọkacha mmasị, na-eme dị iche iche AB akuko, họrọ ọkacha mmasị gị skins na agba atụmatụ.
Playback bụ enweghị ntụpọ: na nke kacha mma nke video nhazi teknụzụ, ọ na-enye gị ihe na-enwetụbeghị ụdị ahụmahụ na-egwu gị iyi faịlụ.
Olee otú rewaindi Videos na Windows na Mac